10W 30W 50W 80W LED tsy mitombina IP65 KNFL-001 hazavana flood,Led Flood Flood,Guzheng Town Led Home Decorative,Guangdong Led Home Decorative - Shina 10W 30W 50W 80W LED tsy mitombina IP65 KNFL-001 hazavana flood, Manufacturer & Supplier
1. 10W 30W 50W 80W LED tsy mitombina IP65 KNFL-001 hazavana flood
2. 18W 24W 36W LED tsy mitombina IP65 KNFL-002 hazavana
3. 60W 80W 100W 120W LED tsy mitombina 150W IP65 KNFL-003 hazavana flood
10W 30W 50W 80W LED tsy mitombina IP65 KNFL-001 hazavana flood. Ny jiro LED ny jiro dia miasa amim-pahombiazana ary manangom-pahefana nefa koa mampihena ny fikojakojana sy ny saram-pandraharahana vokatry ny fiainany lava. Ireo tara-pahazavan'ny tondradrano mahazatra dia mitaky matetika ny fanoloana lamosina ary mila milina mandritra ny fotoam-pitsaboana. Ny lozam-pifamoivoizana LED dia hanampy amin'ny famerenam-bola sy ny fampitomboana ny fahombiazany amin'ny fiantohana ity asa ity dia hijanona foana noho ny tsy fahampian-tsakafo, tapaka na nodorana. Maro ny lanjan'ny fipetrahantsika dia afaka mifehy azy amin'ny dmx512 singal. Môtô môtô: Modely tsy miankina / Master / Slave / DMX / RGB na Steady( 10W 30W 50W 80W LED tsy mitombina IP65 KNFL-001 hazavana flood )
10W 30W 50W 80W LED tsy mitombina IP65 KNFL-001 hazavana flood
©2005-2018 Karnar Mifandraisa aminay Site map Last modified: April 18 2019 04:21:36.